Cima i-cache kwi-Android: Izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga | I-Androidsis
Ngaba kulungile ukucoca i-cache kwi-Android rhoqo?
Okunokwenzeka Ngaba ukhe weva ngokususa i-cache kwi-Android?. Ihlala ikhankanywa njengeyona nto iluncedo kwifowuni yethu, kwaye yinto ekufuneka siyenzile rhoqo. Ngokwenxalenye le ngxelo iyinyani, nangona kukho izinto ezithile ezimbi ekufuneka sizithathele ingqalelo ngaphambi kokucoca i-cache yefowuni okanye ii -apps.
Ke ngoko, ngezantsi Sikuxelela ngakumbi ngokususa i-cache kwi-Android, kunye nezibonelelo kunye nezisombululo esizifumanayo kulo msebenzi. Ke siya kuba nolwazi oluthe kratya malunga nayo, kwaye siya kuyazi ukuba masenze njani xa sifuna ukukwenza oku kwifowuni yethu.
1 Ngaba kulungile ukucoca i-cache?
2 Eyona ndlela yokucoca i-cache kwi-Android
Ngaba kulungile ukucoca i-cache?
Singayithetha loo nto i-cache luhlobo lweenkumbulo ezincedisayo, apho zonke iintlobo zeefayile zethutyana zigcinwa khona. Ezi fayile zethutyana zenziwe xa sisebenzisa iapp okanye umdlalo kwifowuni yethu ye-Android. Ngokuchasene noko abantu abaninzi bacinga, ezi fayile zexeshana azidingeki ukuba iiapps zisebenze kakuhle. Nangona banefuthe elihle xa besenza.
Kuba inkqubo yokusebenza iyazisebenzisa ukuya khumbula iinkqubo xa usenza. Xa iifayile zexeshana zigcinwa, ingcebiso kukususa i-cache yezicelo. Kuyenzeka ukuba ucime i-cache ye-Android, eyi ukufikelela kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Ewe kunjalo, ukugcina uninzi lwezi fayile akuyona into elungileyo kwifowuni yethu. Ukuqokelelwa okukhulu okufanayo kunokubangela ukuhla kwefowuni. Iyavakala ke le nkqubo kwaye icime i-cache rhoqo kwi-Android.
Kodwa isitshixo malunga noku kukaninzi kangakanani kufuneka sikwenze oku. Kuya kufuneka kube lixesha elide, ubuncinci. Akulunganga ukusoloko ususa i-cache kwi-Android. Kungenxa yokuba, kwelinye icala, akukho namnye ugcino oluye lwaqokelelwa ngelo xesha, kwaye ngenxa yokuba sikwabangela ukunciphisa ukusebenza kwefowuni. Into engafunwa ngumsebenzisi.
Njengoko besesitshilo apha ngasentla, i-cache yimemori esetyenziswa zizicelo kwifowuni ukuze zikwazi ukufikelela kwidatha yakho ngokukhawuleza. Ke baya kuba nakho ukubaleka ngokukhawuleza emnxebeni. Ukuba sicacisa i-cache rhoqo, izicelo kuya kufuneka ziqale ekuqaleni ngamaxesha onke. Ke ngoko, kwixesha elizayo xa siyisebenzisa, kuyakufuneka isebenze ngakumbi, oko kuthetha ukuba ukusetyenziswa kakhulu kwezixhobo kwifowuni yethu.
Eyona ndlela yokucoca i-cache kwi-Android
Njengoko besesitshilo ngaphambili, sinayo iindlela ezimbini ezahlukeneyo zokucoca i-cache kwifowuni yethu ye-Android. Kwelinye icala, sinokucoca i-cache yefowuni iphela, ekufuneka siyisebenzisile imo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, malunga nokuba ungafunda phi ngakumbi kule khonkco. Nangona sinethuba lokucima i-cache yesicelo. Into esinokuzenzela yona.
Kule meko yetyala, asizukubhenela kwizicelo ezisinceda kule nkqubo. Ngapha koko, uninzi lwezi zicelo sizifumana kwiVenkile yokuDlala, ezithi zicima indawo efihlakeleyo, azenzi nto singenako ukuyenza. Ke akukho ngqiqweni ukuba sizisebenzise emnxebeni.
Eyona ndlela ilungileyo malunga noku cacisa i-cache yesicelo kwifowuni yethu. Le yinto esele siyichazile ngaphambili kwisifundo, ukuba ungafunda kule khonkco. Kuyo sifumana amanyathelo ekufuneka siwalandele ukucoca i-cache yesicelo. Yinkqubo elula kwaye isebenza ngcono, kuba inefuthe elincinci ekusebenzeni kwesixhobo sethu se-Android.
Kukangaphi kufuneka uyenze le nto kuxhomekeke kwindlela oyisebenzisa ngayo ifowuni kunye nezicelo ezichaziweyo. Kukho abasebenzisi abenza oku rhoqo kwiiveki ezi-3, nangona kanye ngenyanga kunokuba luncedo kuwe. Kuxhomekeka kwimeko nganye, kodwa into esingafanele kuyenza kukusoloko sibhenela kwesi sisombululo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ngaba kulungile ukucoca i-cache kwi-Android rhoqo?
Uguqula njani iimvume zesicelo kwi-Android
Ezona ndlela zingcono ze-YouTube ze-Android